Bashir:Burbur ku dhaca biyo xidheenka dib-u-curashada waxay noqon masiibo haleesha Sudan - Horn Future
Bashir:Burbur ku dhaca biyo xidheenka dib-u-curashada waxay noqon masiibo haleesha Sudan
Khartoum (Horn Future)-Madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashir ayaa ka digay suurto galnimada ah burbur ki yimaada biyo-xidheenka dib u curashada ee Ethiopia inuu ku noqon doono masiibo haleesha dalka Sudan sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi.
Bashir ayaa sheegay arrimaha welwel ku haya Sudan ee ku saabsan biyo-xidheenkan inay yihiin 3 qoddobo ah oo muhiim ah kuwaas oo kala ah, amaanka ama jidhkiisa dhismihiisa,taariikhda ugu dambeeysa ee buuxinta harada iyo barnaamijyada hawlgalintiisa.
Waxa Cumar al-Bashiir uu carabka ku adkeeyay in hadii uu burburo biyo-xidheenkani ay noqon doonto masiibo haleesha dalka Sudan,halka taariikhda buuxinta biyaha ee harada loo baahan yahay in loo hogaansamo wakhti go’an,si looga fogaado saameeynta uu ku yeelanayo goobaha waraabka Sudan, iyo barnaamijyada la xidhiidha hawlgalinta biyo-xidheenka dib u curashada ee ku xidhan hawlgalinta biyo- xidheennada dhulka Sudan.
Dhinaca kale waxa uu tilmaamay in welwelkaasi uu dhamaaday kadib markii Khartoum ay heshay Addis Ababa balanqaad ah in lagu sameeynayo wax ka baddil la taaban karo qaab-dhismmeedka biyo- xidheenkan.
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: in “dhismaha biyo-xidheenka aynan jirin wax raad ku yeelanaya,taas oo sabab u noqon karta inuu burbur,mana dhici doonto inuu xakamayn waayo qulqulka biyaha”.
Bashir oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi: “Waxaan u hogaansa nahay fulinta heshiiskii 1959, kaas oo u kala qaybiyay biyaha wabiga Nile Masar iyo Sudan,iyada oo Masar qaybta ay ka hesho biyaha Nile ka uunan saameeyn ku yeelan doonin biyo-xidheenka dib u curashado”.
Cumar al-Bashiir ayaa jeediyay hadaladan mar uu ka hadlay shir-warbaahineed si wada jir ah ay ugu qabteen magaaladda Khartoum isaga iyo raysal wasaaraha taliska Ethiopia Haile-mariam oo ku jooga Sudan booqasho 3 maalmood ah.
« Kalluunka nuuca (sardines) ku waxa uu hodan ku yahay (omega-3)	» Trump bemoans removal of confederate monuments